The Ab Presents Nepal » ‘माओवादीको मत १३, एमालेको ३३ प्रतिशत, सत्ता किन गर्ने आधा’?-: ओली
‘माओवादीको मत १३, एमालेको ३३ प्रतिशत, सत्ता किन गर्ने आधा’?-: ओली
गत साता प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफ्नो पार्टीका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालसँग हिसाब हेर्दै कुराकानी राफसाफको प्रयत्न गरे । २०७४ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा तत्कालीन माओवादी केन्द्रले देशभरबाट पाएको कुल मत १३ लाख ३ हजार ७ सय २१ (१३.६५ प्रतिशत) थियो । ६०-४० को अनुपातमा उम्मेदवारी बाँडफाँड भयो । पार्टी एकतामा पनि त्यही हिसाब तय गरियो ।
तर, जनादेश फरक किसिमको आयो । र अहिले बालुवाटारमा बसेर प्रधानमन्त्री त्यही चुनावको हिसाब गर्दै छन् । जुन केही दिनअघि माधव नेपाललाई बोलाएरै सुनाए । चुनाव चिन्हबारे कन्फ्युजन हुँदा ८–१० प्रतिशत मत बदर भएको छाडेर पनि तत्कालीन एमालले पाएको मत हो (३१ लाख ७३ हजार) अर्थात ३३.२४ प्रतिशत । यदि, एउटै चिन्हबाट लडेको भए परिणाम दुवैको ५५ देखि ६० प्रतिशत आउने रहेछ ।
यति हिसाब सुनाएपछि केपीले भने अनि तपाई प्रचण्डसँग मिल्ने ? किन सहमतिको कुरा उठाउनु हुन्छ ? आधा आधा कसरी दिने ल भन्नुस् । उपराष्ट्रपति, सभामुख, प्रमुख सचेतक राष्ट्रिय सभामा उपाध्यक्ष दिएकै छ त । केपीको हिसाब निकाल्ने चातुर्यताबाट प्रभावित भएर होला माधव नेपालले संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिए कुरा त्यस्तो पो हो आजको जनआस्था साप्ताहिक समाचार छ ।